Banaanbax ka dhacay baraawe oo lagu taageeray doorashadii guddoonka Baarlamaanka Koonfur galbeed:-(Sawiro) - Awdinle Online
Banaanbax ka dhacay baraawe oo lagu taageeray doorashadii guddoonka Baarlamaanka Koonfur galbeed:-(Sawiro)
April 2, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada baraawe ee gobalka shabeelaha hoose waxaa manta ka dhacay Banaanbax ballaaran oo lagu taageeray gudoonka Baarlamaanka Koonfur galbeed .
Boqolaal shacab ah oo isugu jira Haween, Caruur, Odayaal iyo dhalinyaro ayaa isugu soo baxay bartamaha Magaalada baraawe , iyagoona banaanbaxooda ku taageeray gudoonka Baarlamaanka oo arbacadii shalay lagu doortay baydhabo.
Sidoo kale Banaanbaxayaasha ayaa socod ku maraya waddooyinka waaweyn ee baraawe, iyagoona ku qeylinaya Erayo ay kusoo dhaweeynayen gudoonka cusub, waxaana banaanbaxa ka qeyb qaadanaya Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Magaalada baraawe.
1 april Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa ka dhacay doorashada Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed .
Xildhibaan Dr Cali Saciid Fiqi oo ahaa Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub ayaa ku guulaystay Gudoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed, waxa uuna helay 83 Cod Dr Fiqi Fadhiga Baarlamaanka waxaa soo xaadiray 93 Xubnood oo ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Previous articleLataliye ka tirsan Xafiiska Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo mushaarkiisa ugu deeqay Dowladda Turkigu
Next articleDhageyso:-Wasiirka Shaqada Somaliland oo ka jawaabtey hadal kasoo yeeray Dowladda Soomaaliya